बैज्ञानिकले पत्ता लगाए बिपरित लिंगीलाई आर्कषिर्त गर्ने १२ सूत्र जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
बैज्ञानिकले पत्ता लगाए बिपरित लिंगीलाई आर्कषिर्त गर्ने १२ सूत्र
विज्ञानले भन्छ, जति सुन्दर भयो जिन्दगी उति नै राम्रो हुन्छ । स्वस्थ तथा ससक्त मानिसलाई अरुले पनि स्मार्ट तथा विश्वासिलो ठान्छन् । तर विपरितलिंगीको आकर्षणको केन्द्र बन्नका लागि वंशाणुगत सुन्दरताको चिट्ठा पर्नैपर्छ भन्ने छैन । वैज्ञानिकहरुले यौन तथा आकर्षणका विषयमा एउटा रोचक अनुसन्धान गरेका छन् । त्यसक्रममा महिला तथा पुरुषहरुका लागि विपरित लिंगीप्रति आकर्षक बन्ने टिप्सहरु पत्ता लगाएका छन् । विपरित लिंगीलाई आकषिर्त गर्ने झण्डै एक दर्जन टिप्स यस्ता छन्-
चम्किलो छालाका लागि फलफूल् तथा सागपातको पर्याप्त सेवन गर्नुस्- अध्ययन अनुसार फलफूल् तथा सागपातको प्रसस्त सेवनले मानिसको छालालाई स्वस्थ तथा आकर्षक बनाउन सहयोग गर्छ । फलफूल तथा सागपातमा एन्टीअक्सिडेन्टका साथै छालालाई स्वस्थ र चम्किलो राख्न सहयोग पूराउन वनस्पतीजन्यa पिगमेन्टहरु समेत पाइन्छ ।
मुस्कुराउनुहोस्- खुसी तथा मुस्कान खासगरी महिलाहरुको हकमा आकर्षणको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र नै हो । तर पुरुषको हकमा भने मुस्कानले खासै आकर्षणको अर्थ राख्दैन । अर्थात् मन्द मुस्कान भएका महिलाहरु जसरी पुरुषको पहिलो रोजाइमा पर्छन् त्यसैगरी मुस्कान छर्ने पुरुषहरु महिलाको रोजाइमा पर्ने सम्भावना भने हुँदैन । एक अध्ययनले खासगरी युवा तथा किशोरहरु मुस्कुराएको भन्दा हल्का लजाएको कुरा युवतीहरुले मन पराउँछन् ।
गम्भीर मुद्रा र भद्र स्वभाव- मुस्कुराइरहने पुरुष भन्दा अलि भद्र तथा गम्भीर स्वभावका पुरुषहरु महिलाको रोजाइमा पर्छन् । युनिभर्सिटी अफ बि्रटिस कोलम्बियाका शोधकर्ताहरुका अनुसार खुसी तथा मुस्कान पुरुषहरुको सबैभन्दा कम आकर्षक गुण हो ।
दाह्री खौरिनुहोस्- महिलाका लागि आकर्षक बन्न चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने दाह्री खौरिनुहोस् । अक्सफोर्ड जर्नलमा छापिएको शोध अनुसार महिलाहरु झुस्स दाह्री भएको अनुहारवाला पुरुषलाई कम आकर्षक ठान्छन् । दाह्रीवाल मानिस बढि रिसाहा हुने, सामाजिक अवस्था उच्चस्तरको भएपनि आकर्षक भने नदेखिने ठम्याइ महिलाहरुको हुन्छ ।
रातो लिपस्टिक लगाउनुहोस्- अध्ययन अनुसार महिलाको सरीरको सबैभन्दा आकर्षक अंग उनको ओठ नै हो र ओठमा रातो रंगको लाली लगाएका महिलाहरु पुरुषलाई कामोत्तेजक लाग्छन् । अध्ययन अनुसार रातो लिपस्टिक लगाएकी महिलाको ओठमा एकजना पुरुषले एक पटकको हेराइमा पूरै ७ सेकेण्ड हेर्छ, जबकी आँखामा ०.९५ सेकेण्ड तथा कपालमा ०.८५ सेकेण्ड मात्रै आँखा डुलाउँछ ।
टी लेखेको टिसर्ट लगाउनुहोस्- वास्तवमा यो कुनै मनगढन्ते कुरा होइन । बेलायतको नटिंघम ट्रेन्ट विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले अगाडि पट्टि ठूलो आकारको टी अक्षर पि्रन्ट भएको टिसर्ट लगाउने पुरुषहरु महिलाका लागि बढि आकर्षक बन्दछन् । यस्तो टिसर्टले महिलामा केही भ्रम सिर्जना गर्छ, जस्तै छाति चौडा देखाउँछ, कम्मर सानो देखाउँछ तथा भी सेपको सेक्सी फिगर देखाइदिन्छ । यस्तो विशेषतायुक्त पुरुष महिलाको रोजाइमा पर्छन् । उल्टो टी लेखेको टिसर्ट लगाएका पुरुषहरु त्यसको विपरित भने महिलाको आकर्षणमा नपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
अलि तिखो बोली बोल्नुस्- यो कुरा महिलाको हकमा लागु हुन्छ । आफुले मन पराएको युवकलाई आफुतर्फ आकषिर्त गर्नका लागि महिलाहरुले आफ्नो आवाजको तिखोपना केही बढाउनुपर्ने हुन्छ । बढि तिखो बोली हुने महिलाको जिउ कम भद्दा हुने विश्वास पुरुषहरुमा हुने भएकाले महिलाहरुको आकर्षणमा वृद्धि हुने युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका शोधकर्ताहरुले बताएका छन् ।